30 / 01 / 2020 IZIPHUMA ZEZENDLELA, Auctions
I-Ulukışla Boğazköprü Line Km: Idlula ku-58 + 360 Tender Result
ITurkey State Railways Enterprise 2nd Regional Purchasing Service Directorate (TCDD) inikezwe ithenda yokwakhiwa kwe-Overpass e-Ulukışla Boğazköprü Line Km: 2019 + 688316 ngenani lomkhawulo le-10.459.381,16/15.820.430,31 KIK kanye nenani elilinganiselwe le-58 TL kanye nenani elilinganiselwe le-360 TL. Amafemu angama-60 angenise amabhidi kanye ne-HAKAN KARABULUT - Umsebenzi ohlanganyelwe we-KARABULUT CONSTRUCTION uwine ithenda ngebhidi le-10.464.546,19. Izinkampani eziyi-9 ezibambe iqhaza ithenda engeniswe ngaphansi kwenani elilinganiselwe.
Ithenda ihlanganisa ukwakhiwa kuka-49315,25 m3 Ukugcizelelwa Ukugcwaliswa Kwamandla Kwasodongeni (Kubandakanya EzokuThutha), Ø413,39 - Ø 14 mm I-Thick Ribbed Steel Supply and Labour (Kubandakanya EzokuThutha) neminye Imisebenzi ye-32 Amathani Okhonkolo Osetshenzisiwe. Isikhathi somsebenzi ziyizinsuku zekhalenda ezingama-350 (amakhulu amathathu namashumi amahlanu) ukusuka ekulethweni kwendawo.
Isimemezelo sethenda: Ukwedlula konke e-Ulukışla Boğazköprü Line Km: 61 + 500
Isaziso sethenda: Ukwakhiwa kwe-Overpass e-Ulukışla Boğazköprü Line
Isimemezelo sethenda: Ukwedlula konke e-Ulukışla Boğazköprü Line KM: 58 + 360
I-Ulukışla Boğazköprü Line
Ukwedlula ku Ulukışla Boğazköprü Line
Namuhla Emlandweni: 31 Januwari 2009 Şişhane kanye ne-Atatürk Auto Industry